के हो अल्जाइमर (बिर्सने) रोग ?, यसको लक्षण र रोकथामको उपाय (भिडियो सहित) - Medianp.com
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: आइतबार, मङि्सर १९, २०७३१२:०१0	प्रा.डा. रमेश कँडेल, काठमाडौं । मानव मस्तिष्कका विभिन्न कार्य क्षमता हुन्छन् । कुनै पनि विषयमा धारणा राख्न सक्ने, स्मरण शक्ति, मुल्याङ्कन तथा तर्क गर्न सक्ने लगायतका क्षमता मस्तिष्कका कार्यक्षमता भित्र पर्छन् । यिनैमध्ये स्मरणशक्ति गुमाउँदै जानुलाई नै अल्जाइमर (विस्मृति) रोग भनिन्छ । बिर्सने तथा स्मरण शक्ति हराउँदै जाँदा मानिसको दैनिक जीवनका विभिन्न पाटालाई प्रभावित पार्ने गर्छ । यो रोग प्रायः बढ्दो उमेर अर्थात उमेर ढल्कँदै गएका व्यक्तिहरुलाई लाग्ने गर्छ । विशेष गरी ६० बर्ष उमेर काटेकाहरुलाई यो रोग लागेको देखिन्छ । बुढ्यौली नै यो रोगको कारण भन्दा पनि हुन्छ । सानो उमेरका बालबालिकालाई भने अल्जाइमर लाग्दैन ।
नेपालमा अल्जाइमर रोगीहरुको संख्या एकीन छैन । नेपाल आफैंले यस विषयमा अध्ययन गरेको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय एक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०१५मा नेपालमा अल्जाइमर रोगीहरु ७८ हजार रहेको देखाएको थियो । नेपालमा अल्जाइम रोग लागेको नै भनेर अस्पताल जाने अभ्यास हालसम्म भइसकेको छैन् । अल्जाइमर रोग लागेकालाई परिवारका सदस्यहरुले पागल भएको भनेर पनि अस्पताल ल्याउने गरेका छन् ।
बिर्सने सबै समस्या अल्जाइमर रोगको लक्षण भने होइनन् । जसले दैनिक जीवनमा असर नै पार्ने गरी बिर्सने बानी भने अल्जाइमर रोगको लक्षण हो । अल्जाइमर रोगको अन्तिम चरणमा पुगेका बिरामीको तीन चार बर्षमै मृत्यु भएको देखिएको छ । बिरामीले खाना खान नै बिर्सँदा उनीहरुको मृत्युको कारण बनेको देखिन्छ ।
के कारणले अल्जाइमर रोग लाग्छ ?
अल्जाइमर यही कारणले लाग्छ भन्ने त छैन । तर, बढ्दो उमेर नै यस रोगको मूख्य कारण मानिएको छ । साथै उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मस्तिष्क सम्बन्धी विभिन्न रोगहरु, मस्तिष्क तथा टाउकोमा लागेका चोटपटकका कारण पनि अल्जाइमर रोग लाग्न सक्छ । साथै ३० देखि ६० वर्षको उमेर समूहकालाई भने बंशानुगतका कारण पनि अल्जाइमर लाग्न सक्छ । वयस्यक उमेरदेखि नै अनियन्त्रित रुपमा उच्च रक्तचाप भएकाहरुलाई अल्जाइमर रोग लाग्ने सम्भावना अधिक हुन्छ । साथै भिटामिन ‘बी १२’को कमीले पनि लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
अल्जाइमर रोगका लक्षणहरु :
अल्जाइमर रोगका विभिन्न चरणहरु छन् । साधारण भाषामा भन्दा तीन चरणमा यो रोगका लक्षण देखा पर्छन् । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा अल्जाइमरका फरक फरक लक्षण देखा पर्छन् ।
पहिलो चरण १. साधारण कुराहरु पनि बिर्सनु
२. टाढा रहेका आफ्नै नातेदारलाई चिन्न नसक्नु
३. कार्य क्षमतामा ह्रास आउनु
दोस्रो चरण १. घरपरिवारका सदस्यहरुलाई नै बिर्सने
२. एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहने
३. शंकालु स्वभाव देखापर्ने
४ पुराना कुरा बिर्सँदै जानु
तेस्रो चरण (अतिकडा अवस्था)
१. दिसा पिसावलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु
२. जथाभावी दिसा पिसाव गर्ने र खेलाउने
३. खाना खान नै बिर्सनु (खाना चपाउन बिर्सनु)
४. निद्रा बढी लाग्नु
५. बढी आलस्यता देखापर्नु
६. कपडा लगाउन बिर्सिएर नाङ्गै हिँड्ने
अल्जाइमर रोगको नेपालमै पत्ता लगाउने सकिन्छ ?
केही बर्षअघिसम्म नेपालमा यो रोग पत्ता नै लगाइन्थ्यो । बिरामीहरु बिर्सने समस्या भएपछि भारतलगायतका मुलुकहरुमा जाने गरेका थिए । कतिपय बिरामीहरु त अमेरिका नै पुग्ने गरेका थिए । त्यत्तिखेर बिरामीले चिकित्सकप्रति विश्वास नगर्नु र चिकित्सकमा पनि आत्मविश्वासको कमी देखिन्छ । तर, अब त्यस्तो अवस्था छैन । नेपालमा पनि अल्जाइमर रोग लागेको पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
यसको उपचार सम्भव छ ?
अल्जाइमर रोगको पूर्ण उपचार भने हुँदैनन् । हालसम्म उपलब्ध औषधिबाट भइरहेको अवस्थाबाट बढ्न नदिन भने सकिन्छ । अल्जाइमर भइसकेकाहरुलाई पूर्ण निको पार्ने औषधि भने उपलब्ध छैन । तर, चरण पार गर्न भने दिइन्नँ । हालसम्म उपलब्ध औषधिबाट एउटा अवस्थाबाट अर्काे अवस्थामा जान नदिने र बल्झन नदिने मात्रै हो । यसको औषधिको अध्ययन अनुसन्धानकै चरणमा रहेको छ ।
१. मुटुजन्य समस्या तथा रोग लाग्न नदिनु
२. वयस्क उमेरमा उच्चरक्त चाप हुन नदिने
३. दुर्घटनाबाट जोगिने
४. धुमपान र मद्यपान नगर्ने
५. नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने
अल्जाइमर रोगीका आफन्तले गर्नुपर्ने कार्य १. अल्जाइमर रोगको लक्षण देखा पर्ने वित्तिकै बिरामीलाई उपचारका लागि विशेषज्ञकहाँ लैजाने
२. राम्रो हेरबिचार र स्यहारसम्भार गर्नुपर्ने
३. आफन्तलाई अल्जाइमर लागेपछि नआत्तिकन उपचार सुरु गर्ने
४. जेष्ठ नागरिकलाई लाग्ने रोगहरु सबै अल्जाइमर हुँदैनन् । यसर्थ बेलैमा चिकित्सककहाँ पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार नै बिरामीका आफन्तले हेरबिचार गर्नुपर्छ ।
(प्रा.डा. कँडेलसँग मिडिया एनपीका वरिष्ठ स्वास्थ्य संवाददाता डा. दिलजान मंसूरले गरेको कुराकानीमा आधारित । कँडेल वरिष्ठ जेष्ठ नागरिक रोग तथा अल्जाइमर रोग विशेषज्ञ हुन् । उनी पाटन विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका प्राध्यापक समेत रहेका छन् ।)
माओवादी पोलिटब्युरो बैठकलाई संविधान संशोधनबारे निर्णय गर्न जिम्मेवारीअमेरिकामा भीषण आगलागी, ९ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या बढ्न सक्ने आशंका
ओलीले भने– सरकार नै कीर्ते छ डीआईजी सिलवाल के कुरा र ? (भिडियो सहित)
यस्ता छन् अदुवा सेवन गर्दाका ६ फाईदा